Ngokubanzi - Iindaba zeGajethi | Iindaba zeGajethi (Iphepha 5)
I-Polestar 1, i-hybrid coupe evela kwiVolvo iya kuxabisa i-155.000 ye-euro
I-Polestar 1 yi-cuopé yokunethezeka ephuhliswe yiVolvo kwaye iya kuba nexabiso le-155.000 ye-euro xa iya kwintengiso kulo nyaka we-2018
IBelgium iyazivala iibhokisi zokuphanga kwimidlalo yevidiyo
Iibhokisi zokuphanga kwimidlalo yevidiyo evaliweyo eBelgium. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo se-ofisi yezobulungisa kwilizwe ukuphelisa ukuphanga iibhokisi kwimidlalo.
UGoogle uba nzulu kwaye ufuna zonke iiterminal ezintsha ukumilisela nge-Android Oreo
Kuyinyani ukuba abavelisi ngokuyinxalenye babekekekekekekekekeleleni umthetho okhoyo kwi-Android ngoku, inyani ...
I-Spotify ivula ingxelo yayo yasimahla: Umculo ongaphezulu simahla kunye nokuhamba kakuhle kwimowudi engahleliwe
I-Spotify ihlaziya ingxelo yayo yasimahla kunye nophuculo olwahlukeneyo. Fumanisa ngakumbi malunga notshintsho oluza kunye nokuphela kweMowudi engaMiselweyo kunye nemowudi etya idatha engama-75% engaphantsi.
Ezi ziindaba ngaphakathi Windows 10 Uhlaziyo luka-Epreli, uhlaziyo olukhulu lokugqibela lweWindows
IMicrosof ilumkisa ukuba uHlaziyo luka-Epreli luyalungiswa, intsebenzo entsha yeWindows enezinto ezininzi ezintsha kwaye siza kukuxelela ukuba zeziphi ezifanelekileyo.
Uyikhuphela njani yonke imixholo yakho ye-Instagram
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayifumana njani ikopi yayo yonke imixholo esiyipapashileyo kwinethiwekhi yoluntu ye-Instagram, inethiwekhi yentlalo ephantsi kwesambrela sikaFacebook.
Isihloko sicacile kwaye umculo kwiCD uyanyamalala ngokungxama kunye nemida, konke oku kuza ...
Sikuzisa uhlalutyo lwePulsefire Surge pinpoint ngokuchanekileyo imouse yokudlala, imveliso yeHyperX.
Eli ligumbi lehotele labadali elenziwe yiAlienware
Le yindlela iAlienware asebenzisane ngayo nehotele yaseHilton Panama City ukwenza elona gumbi lokudlala, kwaye inyani kukuba benze kakuhle kakhulu.
Sinezandla zethu ukuyila ngokutsha enye yeenqaba zesandi ezibonelela ngeyona ntsalela iphakathi komgangatho kunye nexabiso kwintengiso, i-Energy Tower 8 G2 Wood.
Ungazi njani ukuba zeziphi izicelo ezinokufikelela kwidatha yakho kaGoogle
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi iinkqubo zomntu wesithathu ezinokufikelela kwidatha yakho kaGoogle? Inkampani ye-Intanethi ikunika ithuba lokuba wazi uluhlu olupheleleyo kunye nokurhoxisa imvume ukuba unqwenela. Sikubonisa ukuba ungayenza njani
I-Coinbase ibhloka i-akhawunti ye-WikiLeaks
I-WikiLeaks ayisayi kuphinda isebenzise iakhawunti yakho yeCoinbase. Fumana ngakumbi malunga noku kuvalwa okwenzakalisa inkxaso-mali yeWikiLeaks kwaye kufuneka ufumane iindlela ezintsha zenkxaso-mali.
INetflix isungula amaBali ayo kwi-app ye-iOS
INetflix yazisa amaBali kwisicelo sayo se-iOS. Fumana ngakumbi malunga neli nqaku litsha lenkonzo yokusasaza eye yazisa usetyenziso lwayo kwaye iza kwi-Android kungekudala.
UDaisy: Irobhothi yeApple etshabalalisa ii-iPhones ezingama-200 ngeyure. Fumana ngakumbi malunga nale robhothi ye-Apple enomsebenzi wayo kukwahlula izinto ezixabisekileyo zeefowuni kwaye ziphinde zisetyenziswe ngendlela ebalaseleyo.
Ihlabathi leJurassic: I-Kingdom ewile iqala ukudlala i-trailer yayo yokugqibela
I-trailer yokugqibela yeJurassic World: Ubukumkani obuweleyo bulapha. Fumanisa ngakumbi malunga nekharavani yokugqibela yesavenge esitsha kuthotho lweefilimu oludumileyo oluza kukhutshwa ngokusesikweni ngoJuni.
Ukubheja iNetflix eYurophu, oku ngumxholo omtsha wemveliso yesizwe ezayo
INetflix ibhengeze iimveliso ezilishumi eziza kusishiya singathethi.
Ngoku ungathenga kwiAmazon USA naphi na
Kwaye ukuba inkampani ivule nje ixesha kwaye ungathenga zonke iimveliso kwivenkile ...
Uyidibanisa njani indlela emfutshane kwibhodi yezitshixo kwi "Ukuskena" usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Ngaba ufuna ukwenza i-keyboard emfutshane yesicelo seWindows Snipping? Le yenye yeendlela zokuphehlelela usetyenziso ngokukhawuleza kwaye ngokulula kwisitayile esinyulu seMacOS
Amaqela e-Sonos kunye ne-HAY ukumilisela uhlelo olunomda lweModeli enye
Isithethi somenzi Sonos udibene nomyili wefenitshala wangoku u-HAY ukumilisela umbala omtsha weSonos One.
I-Android P inokuba nezimbo zomzimba kwiscreen ezinjengezo ze-iPhone X
I-Android P inokuba nakho ukuhamba ngesandla kwi-iPhone X. Fumanisa ngakumbi ngalo msebenzi onokuba yinxalenye yenkqubo yokusebenza.
Khuphela ikopi yedatha yethu yonke kuGoogle
Ukuba unomdla wokwazi ukuba uGoogle wazi ntoni ngawe, kweli nqaku siza kukubonisa indlela esinokuzikhuphelela ngayo yonke imixholo ekwabelwana ngayo kwaye siqhubeka nokwenza ngelixa sisebenzisa iinkonzo zabo.
I-Twitter iyehla ijikeleze umhlaba kwaye ibangele isiphithiphithi
Inethiwekhi eyaziwayo yentlalo ihlupheke ngombane kwidijithali ngale mvakwemini ukusukela nge-15: 54 emva kwemini kwihlabathi liphela kwaye ngaphandle ...
Sihlalutya i-Energy Party 6, inkqubo ye-Energy Sistem yokulungiselela amaqela akho
Ngoyilo olomeleleyo nolunoburhalarhume, lukhatshwa zizandla ezimbalwa zezibane ze-LED, siza kuhlalutya i-Energy Party 6 ngokweenkcukacha ezinkulu, hlala nathi kwaye sifumanise ukuba yintoni eyenza le nqaba yesandi ikhetheke kangaka, yenzelwe ukuba ibe bhetyebhetye kwaye ngaphezu kwako konke , asikaze siyibone into enje kudala.
IMovistar ibonelela nge-50 Mb Fibre Optic Rate ngexabiso elikhethekileyo
I-Movistar: I-50 Mb yeFayibha ye-Optic Rate ekunyuselweni ngexabiso elithile. Fumana ngakumbi malunga neli nqanaba ngoku elikhoyo ngokunyusa ngexabiso elikhethekileyo. Qasha ngoku!
I-Apple iya kulungisa ii-Apple Watch Series 2 ezineengxaki zebhetri simahla
Ukuba une-2mm Apple Watch Series 42 kwaye uneengxaki zebhetri, ngoku lixesha elifanelekileyo lokuba ubuze malunga nenkqubo yokulungisa.
Uthotho lweSpanish uLa casa de papel uba yeyona nto ibukelweyo kungelulo ulwimi lwesiNgesi kwiNetflix
Ngexesha lenkomfa yeziphumo zoqoqosho ezingqinelana nekota yokuqala ye-2018, iNetflix iqinisekisile ukuba uthotho lwaseSpain uLa casa de papel luye lwaba lolona luhlu lubukelwayo kwimbali yeNetflix ngolwimi olungelolwesiNgesi.
Uwufumana njani umculo wasimahla osimahla kwividiyo zakho
Iiwebhusayithi ezibonelela ngomculo wasimahla wasebukhosini sele zithandwa kwiwebhu ngenxa yempumelelo yeYouTube nokwenza kwayo imali, namhlanje sikulethela ezona ndawo zidumileyo zokufumana umculo wasimahla.
I-WhatsApp Plus, usetyenziso olufihla intsholongwane eyingozi
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu komnye wabakhoyo wayifumana le sicelo seWhatsApp Plus engxoxweni ...
I-Sonos Play: I-5 yenye yezona zithethi zikumgangatho ophezulu kwimarike, siyijongisisile
Siza kukubonisa ukuba kutheni esi sithethi sibekwe njengelona xabiso libalaseleyo kwezinye iindlela zokulalelwayo kunye nokuhambelana kwezixhobo.
Khuphela ikopi yayo yonke idatha yethu ye-Facebook
Emva kwehlazo leCambridge Analytica, kuya kufuneka siyeke ukucinga ngento eyaziwayo nguFacebook ngathi. Ukuba awukayazi, ndiza kukunceda ususe amehlo akho ukuze ukhuphele ikopi yazo zonke iinkcukacha zethu ze-Facebook kwaye uqale ungcangcazela.
I-SEGA ibhengeza iMega Drive Mini ukuba ime kwiNintendo
INintendo sele iyibonisile ngohlobo lwayo lweMini yeeconsole. Kodwa lumka, kuba kubonakala ngathi i-SEGA ayifuni kuphoswa kuloliwe odumileyo nokuba ibhengeze i-SEGA Mega Drive Mini yabasebenzisi.
U-Apple wafumanisa ukuba abasebenzi abangama-29 bavuza ulwazi kumajelo eendaba
I-Apple ibhengeza amanyathelo ngokuchasene nabasebenzi abavuza ulwazi. Fumana ngakumbi ngamanyathelo aza kuthathwa yinkampani ngokuchasene nabo bavuza ulwazi kumajelo eendaba.
UXiaomi uya kuba ucinga ngokuthenga iGoPro
UXiaomi uya kuba ucinga ngokuthenga iGoPro. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani yaseTshayina efuna ukuthenga uphawu oludumileyo lweekhamera zemidlalo.
Ukuba udiniwe nguGoogle ngokwazi apho usiya khona, ixesha lifikile lokubonisana kunye nokucima imbali yendawo yeemephu zikaGoogle
I-smartphone ye-BQ iyaqhuma kwaye itshise epokothweni yomfana osuka ePamplona ebangela ukutsha
Umlenze wenkwenkwana eneminyaka eli-14 ubudala evela ePamplona watyiswa isidanga sokuqala ngenxa ...
Nantsi indlela yokuGxila kwiNdlela okanye iMowudi yePortrait esetyenziswa kwi-Instagram
Imowudi yePortrait kwi-Instagram ibizwa ngokuba yiNdlela yokuGxila kwaye ikuvumela ukuba uthathe ii-selfie kwelinye inqanaba lombulelo kuhlalutyo lobunzulu. Sikubonisa indlela yokuyisebenzisa.
Idatha kaMark Zuckerberg nayo ifike ezandleni zeCambridge Analytica
Nokuba umsunguli we-Facebook, uMark Zuckerberg, akazange asindiswe kubiwa kwedatha yakhe eyathengiswa kamva ...
IDodocool DA158, sizijongile ezi ngxolo zokurhoxisa ii-headphone ezingaphaya kwendlebe
IDodocool DA158 yibhloko yentloko kunye neBluetooth yentloko. Banokurhoxiswa kwengxolo kwaye banamaxabiso akhuphisanayo kakhulu.
Ukuphehlelelwa kwePlayStation 5 kukude kwenzeke
Ngaphandle kwenyani yokuba amanye amarhe abonisa ukuba uSony angasungula isizukulwane sesihlanu sePlayStation kunyaka olandelayo okanye ukuphela kwalo nyaka, yonke into ibonakala ibonisa ukuba kusafuneka silinde ubuncinci iminyaka.
I-Spotify iceba ukwenza isicwangciso sayo sasimahla sibe bhetyebhetye
I-Spotify iya kunika izibonelelo ngakumbi kubasebenzisi besicwangciso sasimahla. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani yaseSweden zokutsala abasebenzisi abaninzi kwiqonga layo.
Isamsung ijolise kwimidlalo ngeTV ezintsha nge-AMD FreeSync
Uluhlu olutsha lweethelevishini kunye ne-AMD FreeSync esuka kwi-Samsung ikufutshane nekona kwaye iya kutsala abaphulaphuli ukuba kude kube ngoku ivaliwe ekusebenziseni iimonitha,
UMark Zuckerberg ubambe uxanduva kwiCongress, ukuze ufumanise ukuba idatha yakho ye-Facebook iye yavuza
Lixesha lokuba ufumanise ukuba kude kangakanani ukungangqinelani kokuvuza kwedatha kunye nentlekele yeCambridge Analytics, ngoko ke siza kukubonisa ukuba ungafumanisa njani ukuba ungomnye wabo bachaphazelekayo.
Ungayitshintsha njani ngokulula i-HHD ye-SSD kwilaptop
Siza kukufundisa indlela yokutshintsha ngokulula i-HHD ene-SSD kwilaptop, eneengcebiso ezisisiseko ukuze uzenzele ngokwakho.
UGoogle uguqula, kwakhona, ukukhangela umfanekiso ngoku ukongeza inkcazo
UGoogle uphinde wafikelela kwinjini yokukhangela imifanekiso ngokongeza inkcazo encinci kumfanekiso ngamnye asibonisayo.
Kushiyeke iintsuku ezimbalwa kuphela ukuba basebenzise izibonelelo kwiVenkile yePlayStation
Sikuzisa isishwankathelo sokuba zeziphi izibonelelo onokuthi ungaziphosi kwivenkile ye PlayStation ukuze ube nexesha elihle lokugcina ii-euro ezimbalwa.
Sihlalutya i-Western Digital SSD, imodeli ye-WD Green ye-240 GB
Siza kuhlalutya enye yeememori ze-SSD ezinenzuzo kakhulu, i-240 GB ye-WD Green SSD. Hlala nathi kwaye ufumanise ukuba kutheni iye yaba yenye yezona zinto zithengisa nzima.
I-Twitter ifuna ukuba sisebenzise kuphela usetyenziso lwayo lwezixhobo eziphathwayo kwaye sele iza kufika apho
Inethiwekhi yentlalo kaJack Dorsey, omnye wabasunguli be-Twitter, uceba ukuguqula i-Twitter API ngotshintsho oluthile oluya kwenza usetyenziso lomntu wesithathu lwe-iOS kunye ne-Android lube lilize.
Iiveki ezimbalwa ngePodPod yasekhaya: okona kulungileyo kuseza
I-HomePod inamanqaku afanelekileyo kumgangatho wesandi, kodwa eyona ilungileyo ayizukuza ukuba ngaba iApple inyani ngayo.
Iifoto ezininzi zivuthiwe masibone i-LG G7 ThinQ kufutshane
Kancinci ukuvuza okungaphezulu kwe-LG G7 kuyabonakala kwaye namhlanje zezona zibonakalayo kwezi veki zidlulileyo nangona kubonakala ngathi bafuna ukufihla "inotshi".
I-Facebook iya kukuvumela ukuba ucime imiyalezo kwi-Messenger
I-Facebook Messenger iya kuvumela abasebenzisi ukuba bayicime imiyalezo. Fumanisa ngakumbi malunga nenqaku eliza kwi-app naxa ukufika kwayo kubhengeziwe.
IAmazon iya kutyala i-1.000 yezigidi ekuziseni kwiscreen esincinci "INkosi yemisesane"
Amarhe amva nje anxulumene noluhlu lutsha lweNkosi yemisesane, iphakamisa ukuba inokuba lelona chungechunge libiza kakhulu kuyo yonke imbali, ngohlahlo-lwabiwo mali lwezigidi zeerandi.
I-Boom Supersonic inethemba lokuba inqwelomoya yayo entsha sele ilungile ngo-2023
Emva kwexesha elide ndingazi nto malunga nenkqubela phambili yenqwelomoya entsha yeBoom Supersonic, inkampani ekugqibeleni ibhengeze nje ukuba inethemba lokuba iya kukwazi ukuhambisa iiyunithi zokuqala ngo-2023.
Uyicoca njani imbali kaGoogle
Ukuba unenkxalabo malunga nobumfihlo bukaGoogle kwaye ufuna ukucima yonke imbali igcinwe nguGoogle ngawe, apha ngezantsi sikubonisa onke amanyathelo ekufuneka uwalandele ukuze ukwazi ukucima imbali kaGoogle. Susa naluphi na umkhondo wakho kwi-Intanethi, iindawo, iiapp kunye nokunye!
UXiaomi uthatha i-10% yentengiso ye-smartphone eSpain
Ngo-Novemba ophelileyo u-2017, uXiaomi wabhengeza ukufika kwakhe kwilizwe lethu kwaye ngeli xesha sele ...
I-autopilot kaTesla iyaqhubeka nokusilela kwindawo enye yengozi ebulalayo [Ividiyo]
Kwiintsuku ezimbalwa, iindaba ezimbini ezinzima malunga neemoto ezizimeleyo ezineziphumo ezibulalayo kuwo omabini la matyala, zashukumisa isingqi esihle ...
I-Olympus PEN E-PL9 ifika ngokusemthethweni eMelika
Okokugqibela, emva kokulibaziseka iiveki ezimbalwa, iOlimpus PEN E-PL9 ifika ngokusemthethweni eUnited States. Abasebenzisi kweli lizwe banokwenza ngale khamera ime ngaphandle kuyilo lwayo lwe-retro kwaye inemisebenzi efana nokurekhodwa kwe-4K.
Owona mthengi ulungileyo
Ukuba ujonga umxhasi ukuba akhuphele ezi ntlobo zeefayile, apha ngezantsi sikubonisa ukuba leliphi elona liklayenti libalaseleyo lifumaneka kwimarike kwaye likwangaphezulu.
Iinkcukacha ezibalulekileyo zeGoogle Pixel 3 elandelayo ityhiliwe
Enkosi kwiqela labaphuhlisi beXDA, iinkcukacha eziphambili zesitolimende esilandelayo yenye yeefowuni ekucingelwa ukuba zikhona, iGoogle Pixel 3, ibinokuvezwa.
UGoogle uzakuqhagamshela iAsia neAustralia ngentambo engaphantsi kolwandle
UGoogle usandula ukubhengeza ukuba sele besebenza kufakelo lwentambo entsha engaphantsi kolwandle yeekhilomitha ezingama-9.600 ukudibanisa iAsia neAustralia.
Abasebenzi bakaGoogle ngokusesikweni Inkqubo yoPhuhliso lwePentagon Drone
Abasebenzi bakaGoogle baqhankqalaza ngokusesikweni intsebenziswano kaGoogle kwiprojekthi ye-Maven, iprojekthi eya kuthi ivumele abantu kunye nezinto ukuba zamkelwe kwimifanekiso emileyo kunye nehambayo.
Inani le-Facebook elichaphazelekayo kwihlazo likaCambridge Analytica lenyuka laya kwizigidi ezingama-87
Kwiiveki ezintathu emva kokuba ulwazi lokuphula umthetho lweCambridge Analytica lwaziwa, uFacebook uqinisekisile inani labasebenzisi abachaphazelekileyo: i-87 hayi i-50 yezigidi.
I-iPad entsha ikwanqumamisa kwi-iFixit emva kokuqhushumba
I-iPad 2018, njengoko kunjalo nakwamanye amacebo e-Apple, ayinakho ukufumana imvume ye-iFixit.
Izabelo zeSpotify ziwa malunga ne-8% emva kokuya kuLuntu
Usuku emva kokumiliselwa kweSpotify kwintengiso yemasheya, kukho ukunyuka nokuwa kwexabiso lomntu ngamnye ...
Ukusilela kwePokémon GO Fest kuxabisa i-Niantic $ 1,5 yezigidi
UNiantic uza kuhlawula i-1,5 yezigidi zeedola kwiPokémon GO Fest. Fumana ngakumbi malunga nembuyekezo ekufuneka ihlawulwe yinkampani ukusilela komsitho eChicago.
Umphathi we-OnePlus utyhila amanqaku e-OnePlus 6
Ukuphehlelelwa okukhulu okulandelayo yi-OnePlus 6 kwaye ngokokuvuza kunye neempawu esele ziqinisekisiwe yi-CEO yayo, kujongeka ngathi ayizukuphoxisa mntu.
Ukudubula abane bonzakele kwiiofisi zeYouTube eCalifornia
Ikomkhulu le-YouTube eCarlifonia lifumene utyelelo kumfazi oxhobileyo, okwangoku oshiye aba-4 benzakele ngobukrakra obahlukeneyo.
ILogitech Harmony 950 ekwaziyo ukulawula inani elingenakubalwa leemveliso ze-elektroniki ngaphakathi kwamakhaya ethu, ukusuka kwimozulu yomoya ukuya kwi-Movistar + decoder, namhlanje siyayihlalutya.
I-Instagram inciphise kakhulu ukufikelela kubaphuhlisi kwidatha yomsebenzisi nge-API, yiyo loo nto uninzi losetyenziso lolu hlobo luyekile ukusebenza.
I-Bulb yokuKhanya kwe-Smart kunye ne-Smart Socket, ukukhanya okukhanyayo nge-Koogeek [UHLAHLELO]
Namhlanje sikuphathela iindlela ezimbini zexabiso eliphantsi nezona lusebenzayo ukwenza ukukhanya kwakho kubukeke ekhaya, sithetha ngeBhalbhu yeSibane eSmart kunye neSocket Socket nguKoogeek.
UGoogle uya kuyivala imfutshane yedilesi kwiintsuku ezimbalwa
Isifinyezo sedilesi kaGoogle, yenye yezona zisetyenziswayo, ngokuqinisekileyo iya kunciphisa iimfama ngo-Epreli 13.
UTesla uqinisekisa ukuba i-Autopilot yenziwe yasebenza ngexesha lokuhlaselwa kweModeli X
I-autopilot yenziwe yasebenza kwingozi yemoto kaTesla. Fumana ngakumbi malunga nezizathu zengozi yemoto kaTesla esandula ukubanga ubomi bomqhubi eCalifornia.
INew York International Motor Show 2018 iqalile. Kwaye uMini utyhile umxholo we-iconic Mini. Ngokukodwa ngakumbi umxholo weClassic Mini Electric
UJulian Assange uphelelwa yi-intanethi wohlwaywa ngurhulumente wase-Ecuador
Umzi wommeli wase-Ecuador waseLondon uthathe isigqibo sokususa unxibelelwano lwe-Intanethi olwalonwabelwa nguJulian Assange, ngenxa yokungenelela okuqhubekayo kwabanye oorhulumente abanokwenzakalisa ubudlelwane bakarhulumente.
I-Starlink: Inethiwekhi yesathelayithi ebanzi ka-Elon Musk yeesethelayithi ezingama-4.425 yamkelwe
Inethiwekhi yesathelayithi ye-Starlink ka-Elon Musk yamkelwe. Fumanisa ngakumbi malunga neprojekthi eyenziwe ngumenzi we-SpaceX ofumene imvume yeFCC.
Okokugqibela iTiangong-1 iya kuwa kule Cawa izayo
Ngaphandle kwethemba lokuba inyani yokuba iTiangong-1 iphumile kulawulo ibangele, khange sikwazi ukuza kuthi ga namhlanje ukuba iyakuphela iwele eMhlabeni ngeCawe ezayo, ngo-Epreli 1, 2018.
Isithuthi esizimeleyo sihlawuliswa ngokusondela kakhulu kumntu ohamba ngeenyawo kwindawo yewela iqwarhashe
Kancinci kancinci kuyaboniswa ukuba ukuqhuba okuzimeleyo akufezekanga njengokuba umntu ebenokulindela njengoko befumana izohlwayo kwisitayile sabo sokuqhuba.
Thintela i-Facebook ekulandeleleni kunye nolwandiso olutsha lweFirefox
Ngombulelo kuFacebook Container ulwandiso lweFirefox, sinokunciphisa umda ukufikelela kwinethiwekhi yoluntu kuyo yonke idatha yethu yokukhangela, ukongeza ekuthinteleni ukuba isilandele xa siphumile kwinethiwekhi yoluntu.
U-Lior Ron, umseki-ntsebenziswano ka-Otto, ushiya u-Uber
Umsunguli we-Otto Lior Ron ushiya i-Uber ngokusemthethweni. Fumana ngakumbi malunga nokuyeka emsebenzini kunye neengxaki u-Uber ahlangabezana nazo okwangoku emva kwengozi ebulalayo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
UTesla uza kuphinda aphandwe kwakhona emva kwengozi neModeli X
UTesla uza kuphandwa ngengozi yokusweleka neModeli X. Fumanisa ngakumbi ngale ngozi kunye nophando olwenziwa yinkampani ngoku.
I-Apple yazisa ngexabiso eliphantsi nge-iPad ehambelana nePensile yeApple
Silungiselele uthelekiso phakathi kwe-iPad 2017 kunye ne-iPad entsha ye-2018 ukuze uthathele ingqalelo into eyahlulahlula le nguqulelo intsha yexabiso eliphantsi kuhlobo lwangaphambili lwe-iPad.
UFoxconn ubhengeza ukuthengwa kweBelkin nge- $ 866 yezigidi
UFoxconn uthenga iBelkin nge- $ 866 yezigidi. Fumana ngakumbi malunga nokuthengiselana okuchaphazela inkampani yaseMelika. Basadinga ukunika ukuqhubela phambili.
Iindaba ezivela kwimithombo yendawo ziya kuba yinto ephambili ngoku kuFacebook
Ngaphandle kwamathandabuzo, inethiwekhi yoluntu ye-Facebook yenza iindaba ngezizathu ezininzi kwaye eyona iphambili sisikhalazo ...
I-Facebook iphakamisa amatyala amane ngaphezulu kwehlazo leCambridge Analytica
I-Facebook yamangalela amatyeli amane ngehlazo likaCambridge Analytica. Fumanisa ngakumbi malunga neemfuno zokuba inethiwekhi iqokelele iingxaki zayo kwimfihlo.
INetflix iya kukuhlawula ukuba ufumana iimpazamo kwiqonga layo
INetflix ivula eyayo imbuyekezo yenkqubo yabasebenzisi. Fumanisa ngakumbi malunga neqonga lokusasaza inkqubo yokuvuza evumela abasebenzisi ukuba babone iibugs.
Izigidi ezibini zabasebenzisi zisebenzisa iSpotify ngokungekho mthethweni
Izigidi ezibini zabasebenzisi zisebenzisa iSpotify ngaphandle kokuhlawula nangaphandle kwentengiso. Fumana ngakumbi malunga nenani labasebenzisi abangahlawuliyo okanye abangenazintengiso eqongeni.
Ukuthenga nge-Instagram kungasetyenziswa eSpain
Ukuthenga nge-Instagram kufika eSpain. Yeyona ndlela ilungileyo yokubeka amakhonkco okuthenga kwimifanekiso yakho. Kwindlela yelebheli esulungekileyo
U-Uber wayesele enengxaki ngeemoto zakhe ezizimeleyo ngaphambi kwengozi
U-Uber wayenengxaki neemoto ezizimeleyo ngaphambili. Fumana ngakumbi malunga neengxaki inkampani ebinazo neemoto zayo ngaphambi kwengozi ebulalayo eyenzekileyo kule veki.
U-Elon Musk uvale iphepha likaTesla kunye neSpaceX kuFacebook
U-Elon Musk uvale iphepha likaTesla kunye neSpaceX kuFacebook. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo sesigqeba sokuvala amaphepha amabini e-Facebook eenkampani zakhe ezinezigidi zabalandeli.
I-NASA iyayicima iteleskopu yendawo kaFermi ngenxa yokungahambi kakuhle
Iteleskopu yeNerm Fermi iyeka ukusebenza ngenxa yokusilela. Fumanisa ngakumbi malunga nokusilela okuchaphazela iteleskopu kwaye kuye kwanyanzela iNASA ukuba iyicime okwexeshana.
I-HTC Vive Focus iya kufika kwimarike ngaphambi kokuphela konyaka
Isizukulwana esitsha seHTC Vive, iVive Focus iya kufika kwimarike kamva kulo nyaka, unyaka emva kokufika e China, apho zikhoyo ngoku.
Manene namanenekazi, uthethile uMark Zuckerberg
Kwaye emva kwayo yonke isiphithiphithi esinyusiweyo kwimeko ye-Facebook kunye nedatha ...
UGoogle, uTwitter noFacebook baphelelwa ngabaphathi bezokhuseleko
Abalawuli bezokhuseleko kuFacebook, kuTwitter nakuGoogle bayarhoxa. Fumanisa ngakumbi malunga noku kurhoxa emsebenzini okunyuse urhano oluninzi kwintengiso.
I-Google Play Instant ikuvumela ukuba uzame imidlalo ngaphandle kokuzikhuphela
Intsha ibizwa ngokuba yiGoogle Play Instant kwaye iya kusivumela ukuba sivavanye imidlalo ngqo kwiGoogle Play Store ngaphambi kokuzikhuphela.
I-Facebook kunye neCambridge Analytica kwiliso lenkanyamba
Kule mihla inethiwekhi yoluntu i-Facebook iyabethwa macala kwaye yeyona nto inobungozi kwinkampani uqobo ...
Windows 10 iya kuxhasa ifomathi ye-HEIF yeefoto
Uhlaziyo olukhulu olulandelayo olusinikwa yiWindows, luya kubandakanya inkxaso yefomathi yoxinzelelo lomfanekiso we-HEIF
USony uyeka iPS Vita ngokusemthethweni eSpain
I-PS Vita iyekile ngokusemthethweni eSpain. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo senkampani sokuyeka ukuthengisa ikhonsoli kwilizwe lethu.
Isicwangciso esitsha senyanga seAmazon sifika
I-Intanethi enkulu yokuthenga i-Intanethi isandula ukubhengeza isicwangciso esitsha senyanga sabathengi beqonga abafuna ukuqesha iNkulumbuso yeAmazon
I-PUBG iza kwizixhobo eziphathwayo ukujongana nempumelelo yeFortnite
I-Tencent imele i-Fortnite ngokumangalisayo kwaye ngokungxama isungule umdlalo wayo wevidiyo wePUBG kumaqonga eselfowuni.
I-ID yobuso be-IP X yiminyaka emibini ngaphambi kokhuphiswano
Bayakuqinisekisa kwakhona kwiReuters, kucacile kwaye ngqo: i-ID yobuso ye-iPhone X yiminyaka emibini ngaphambi kwe ...
I-KsixFitness Explorer 2, sihlalutya i-smartwatch ngokuzimela konyaka omnye [UHLAZIYO]
Siza kujongana nayo yonke imiba enomdla yoku kunxitywa okusungulwe yi-Ksix eyona asethi yayo iphambili kukuba iyakwazi ukuhlala unyaka wonke ngaphandle kokutshintsha ibhetri.
Uvavanyo lwebhokisi yomculo yamandla 9
IBhokisi yoMculo waMandla 9 sisithethi esinomdla sokuba kuphela i-90 ye-euro isinika i-40 W yamandla kunye nonxibelelwano olunomdla ngeBluetooth, i-USB, i-MicroSD, iRadiyo ye-FM okanye iAudio-in. Ifumaneka ngemibala emibini (emnyama nomhlophe) kwaye yoyilo oluncinci lixabiso elikhulu lokukhetha imali. Isandi somgangatho
Ingozi yokuqala ebulalayo enemoto ezimeleyo ka-Uber
Into yokuqala naphambi kokuqala kweendaba zinike uvelwano kunye nayo yonke inkxaso kubahlobo, kusapho ...
I-CAT S31 ezandleni zethu, yeyona smartphone inganyangekiyo kwihlabathi [UHLAZIYO]
I-CAT S31, itheminali eyilelwe ukumelana neeseshoni zomsebenzi ezigqithileyo kwaye inokuba liqabane lakho elifanelekileyo kwiimeko apho umnxeba oqhelekileyo ungaphathi ngokulula.
I-Plattsburgh iba sisiXeko sokuqala sokuthintela iMigodi yeBitcoin
Isixeko sasePlattsburgh siyakwalela ukumbiwa kweBitcoin kunye nezinye izinto ezigcina imali. Fumanisa ngakumbi ngesi sixeko esiye saba sesokuqala ukuwuvala lo msebenzi ngenxa yokusebenzisa kwawo amandla amakhulu.
Enkosi kuDuolingo sinokufunda isiKlingon ngokulula
Ukuba ungumlandeli wothotho lweStar Trek kwaye uhlala ufuna ukufunda isiKlingon kodwa uswele umnqweno okanye ukwazi indlela yokwenza, enkosi kuDuolingo singayenza ngokulula
I-Spotify iqala ukuvavanya ngesincedisi sayo selizwi
I-Spotify ivavanya ilizwi layo elincedisayo. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zeqonga lokusasaza esele libonisa umncedisi walo wokuqala oza kwenza ukusetyenziswa kwesicelo kube lula kakhulu.
Ikhadi lokutsala iAmazon ngoku liyafumaneka eMexico
Ingxilimbela yeAmazon ayiyeki ukusothusa ngokufika kweemveliso ezintsha kwaye kule meko sinento entsha ...
UMicrosoft uqinisekisa ukuba iXbox One X iya kubandakanya iFreeSync 2
UMicrosoft uqinisekisile ngokusesikweni ukuba iXbox One X iya kuba netekhnoloji yeFreeSync 2 eya kusivumela ukuba sonwabe ngakumbi kwimidlalo ebhetele.
UStephen Hawking usweleke eneminyaka engama-76
Isazi ngeenkwenkwezi esibalaseleyo uStephen Hawking usweleke ngentseni yango-Matshi 14, 2018 ekhayeni lakhe eCambridge ekunye nezihlobo zakhe.
I-SoundPeats Q12, sihlalutya ezi ntloko zexabiso elifanelekileyo lemali
Sibuya nenye into yohlalutyo lwentloko, kwaye sihlala sifuna ukuba uhlale ... enkosi kwiActualidad Gadget.
I-Philips Hue yokuqala yangaphandle sele ibhengeziwe
UPhilips Hue: Izibane ezintsha zangaphandle sele zibhengeziwe. Fumana ngakumbi malunga nezibane ezitsha zePhilips eziza kungekudala kwintengiso.
INetflix iyalumkisa, usetyenziso lwayo alufumaneki kuTshintsho ngenxa yeNintendo
I-firm iyalumkisa, iNetflix ayifumaneki kwiNintendo Shintsha kuba uphawu lwaseJapan alunamdla kuwo.
I-SoundPeats Q30, sihlalutya isandi esiphambili ngamaxabiso asezantsi
I-SoundPeats Q30, ii-headphone ezingenazingcingo ezinamathuba amaninzi kunye nexabiso elinomtsalane.
I-2001 HAL: I-Odyssey yendawo ephindaphindwe ngombulelo kwi-Alexa
Inqaku elinomdla losuku, sikubonisa ukuba bayiguqule njani iAmazon's Alexa ukuba ibe yiHAL ukusuka ngo-2001: Isithuba sendawo odyssey.
I-Fortnite Battle Royale iza kwiifowuni eziphathwayo
I-Fortnite Battle Royale iya kukhutshwa kwiifowuni eziphathwayo. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa komdlalo othandwayo kwizixhobo eziphathwayo kamva kulo nyaka.
Indlela yogcino lweGmail
Ngaba unesiqingatha sobomi kwiakhawunti yakho ye-Gmail? Ewe, ngaphambi kokuba kwenzeke impazamo kwaye imiyalezo yakho- kunye nezincamathiselo zitshabalale, yenza ikopi yogcino. Sichaza indlela yokwenza
I-EBay Superweekend ilapha, thatha ithuba lokubonelela okumangalisayo
I-eBay Superweekend sisibonelelo esisodwa esivelele ukongeza kunikezelo lwaso ukuya kuthi ga kwi-60% isaphulelo, ezi zezona zinikezelo zibalaseleyo.
"Ilungelo lokulungisa umthetho", ityala elisekunene lokulungisa izixhobo zombane
Kule meko ngumthetho okanye umthetho osayilwayo osasazeka kulo lonke elaseMelika, ...
UJon Favreau ukubhala kunye nokuvelisa uthotho lwe Star Wars
UJon Favreu uza kubhala kwaye avelise uthotho lweeMfazwe Star. Fumanisa ngakumbi malunga nokusayina okwenziwe yiDisney kuthotho lokuqala ngokusekwe kuthotho lwefilimu oludumileyo.
IPorsche Mission E Cross Turismo, i-SUV yombane yohlobo lwaseJamani
IPorsche iyaqhubeka nokubheja ekwaziseni izithuthi zombane ngokupheleleyo. Kwaye okulandelayo ukuvela yi-Porsche Mission E Cross Turismo
I-Facebook Messenger Lite yazisa ngeefowuni zevidiyo
Iifowuni zevidiyo ziza kwi-Facebook Messenger Lite. Fumanisa ngakumbi malunga nenqaku lokubandakanya incoko engasindi incoko, ebonakala ingavakali ncam.
Iinguqulelo zokuqala ze-beta ze-Android P ngoku ziyafumaneka
Siza kubona ukuba zeziphi iindaba ze-Android P yoPhuculo loPhuculo, ukufumana umbono ongaphezulu okanye omncinci malunga nekamva le-Android.
Ngoku ungandwendwela iipaki zeDisney ezivela kuGoogle Street View
Iikhamera ezingama-360º zenza umsebenzi olungileyo ezindleleni, ezixekweni, ezitalatweni nakwezinye iimbombo zeplanethi yethu….
Le yindlela i-Huawei P20 ebukeka ngayo, i-smartphone yokuqala eneekhamera ezi-3
Imifanekiso "esemthethweni" yokuqala yeHuawei P20 entsha, eyokuqala eyi-smartphone eneekhamera ezi-3 ngasemva
I-Apple ifuna ukuphelisa ifomathi ye-iTunes LP ngo-2019
I-Apple izakususa i-iTunes LP phambi kokuphela kwalo nyaka. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani yaseMelika zokuphelisa le fomathi ngoku.
Ungazikhuphela njani ii-GIF kunye neevidiyo kwi-Twitter
Ukukhuphela ezo vidiyo okanye ii-GIFs oqhele ukuzibona kwiiakhawunti ozilandelayo ku-Twitter yinkqubo elula kakhulu kwaye kweli nqaku sikubonisa isikhokelo esincinci sendlela yokukhuphela iividiyo kunye nee-GIF kwi-Twitter.
Ulufaka njani ulwandiso lweChannel kwiFirefox
Oko kwasungulwa iFirefox Quantum, iChannel kunye neOpera extensions ziphantse zahambelana ngokupheleleyo neFirefox, kuya kufuneka wenze inkqubo encinci yokuguqula esineenkcukacha kweli nqaku.
I-teaser yokuqala yexesha elidlulileyo leNdlu yeeCards ngoku iyafumaneka
INetflix isebenzise umbhiyozo ka-Oscar ukukhupha ngokusesikweni i-teaser yokuqala yexesha eliza kuba lixesha lokugqibela leNdlu yeeCards, uthotho apho uKevin Spacey anyamalale khona.
IAmazon neGoogle zihlala zilwa: iimveliso zeNest ziya kunyamalala kwiAmazon
Ezinye iindaba ezimbi zegoogle: iimveliso zayo ezizenzekelayo zasekhaya azisayi kuphinda zithengiswe kurhwebo olukhulu kwiAmazon
UApple unokubheja xa ekhupha iMacBook Air ebiza ixabiso eliphantsi
Umhlalutyi we-KGI odumileyo, uMing-Chi Kuo ucacile ukuba oku kuqala kuka-2018 izakuba ngunyaka weMacBook Air, kwaye iApple iyakuyihlaziya ngemodeli yexabiso eliphantsi.
Abaphumeleleyo beeMbasa zeOscar zika-2018
Apha ngezantsi sikubonisa ukuba ngubani ophumelele ii-Oscars zika-2018, amanye amabhaso athe asasazwa ngokubanzi kwaye akubangakho baphumeleleyo
Abasebenzi abangama-825 baseAmazon eSpain babiza isitrayikhi malunga nesivumelwano esitsha
Abasebenzi abangama-825 baseAmazon eSpain babiza isitrayikhi malunga nesivumelwano esitsha. Fumana ngakumbi malunga nesitrayikhi abasibizileyo kunye nezizathu zaso.
I-WhatsApp iya kwazisa abasebenzisi xa imiyalezo yabo idluliselwe
Umsebenzi olandelayo u-WhatsApp oceba ukuwuphumeza uya kuba ngumsebenzi wokwazisa umsebenzisi xa sithumela eminye yemiyalezo abelane nathi ngayo.
AbakwaNokia bathenga i-Unium ukuphucula ukusebenza kunye ne-Wi-Fi yokugubungela ekhaya
AbakwaNokia bayaqhubeka nezicwangciso zabo kwaye babhengeza ukuthengwa kwe-Unium, le yinkampani yesoftware ekhethekileyo ...
I-Instagram iya kongeza inkonzo yokufowuna nevidiyo
I-Facebook isebenza ukuzisa ezinye izinto kwi-Instagram. Kwaye okokugqibela okuye kwafunyanwa kukuba iya kudibanisa iifowuni zomsindo kunye nevidiyo
IGitHub ihlupheka kakhulu kuhlaselo lwe-DDOS kwimbali ye-Intanethi
Iqonga le-GitHub liye lafumana olona hlaselo lukhulu lwe-DDOS kwimbali ye-Intanethi ngoFebruwari 28, uhlaselo oloyisile ngaphandle kwengxaki, enkosi kukhuseleko olunalo kolu hlaselo.
IMicrosoft Soundscape inceda abantu abangaboni kakuhle ukuba babone umhlaba
UMicrosoft usandula ukwazisa usetyenziso olutsha kwiVenkile yeApple yeApple, ejolise ekuphuculeni unxibelelwano lwabasebenzisi abaneengxaki zombono ngendawo esingqongileyo ebizwa ngokuba yiSondscape
USony uphosa indlu ngaphandle ngefestile ngemidlalo yasimahla ye-Matshi PlayStation Plus
AbakwaSony babhengeze ngomzuzu wokugqibela imidlalo yevidiyo eya kuba simahla ngenyanga kaMatshi ngobhaliso lwePS Plus, kwaye iya kukushiya uvule umlomo, Igazi elihamba igazi kunye neRatchet kunye neClanck.
I-Sony A7 III, amanqaku eSakhelo esipheleleyo seSony esitsha
I-Sony ivelise ukuzibophelela kwayo kwiikhamera ezingenazipili zesakhelo esigcweleyo, ikhamera esivumela ukurekhoda kwi4k HDR, 24 mpx yesisombululo kunye nenani elikhulu lezinto ezintsha
I-Twitter isungula icandelo lebhukumaka ukuze kamva ubone iitweets ofuna ukuzifunda
I-Twitter sele inebhukumaka zokugcina iitweets. Fumanisa ngakumbi malunga nenqaku elitsha elifikileyo kwinethiwekhi yoluntu edumileyo.
I-LG G7 yaziswa kwi-MWC, kodwa ngasese
Olunye ulwazi ludlulile ngokubhekisele kuhlobo lwenkcazo kubantu abambalwa abanethamsanqa apho i-LG ibonakalise iiprototypes zento eza kuba ziifowuni ezilandelayo.
"Inotshi" kwi-MWC okanye emfazweni ukukopa kude kube neziphene
Imfazwe yokukopa iApple ayinasivumelwano, zibekho iiterminal ezimbalwa ezibonisiweyo ngexesha leNkomfa yeHlabathi yeSelfowuni ngale "notch".
Eyona ilungileyo ye-MWC 2018
Ukuba unqanyulwe kancinane kwi-MWC, kweli nqaku sikubonisa ukuba zeziphi ii-smartphones ezingcono eziye zenziwa ngexesha lohlelo luka-2018.
I-Cambium Networks '"i-Intanethi eXineneyo" iya kubonelela ngoqhagamshelo lweWi-Fi naphina emhlabeni
Xa sisiya ezintabeni okanye kwiindlela ezinqumla ukudlula kwintaba, unxibelelwano okanye ukugubungela ...
Inzwa yeminwe ephantsi kwesikrini seVivo X20 Plus iyasebenza ngaphandle kokukhuhla
Uvavanyo lokuchasa apho iVivo X20 Plus ibekwe phantsi kwalo lusibonisa ukuba ngaphandle kokukrwela indawo yesenzi, iyaqhubeka nokusebenza ngokugqibeleleyo.
Imfazwe ngokuchasene nemicropayments kwimidlalo yevidiyo, iya kuba nefuthe kwilebheli yobudala
E-United States of America bayacaca ukuba le nto kufuneka iqale ukulawulwa, ngoku baya kuyibhala le midlalo yevidiyo kwaye iya kuba nefuthe kubuncinci bobudala obucetyiswayo.
UVero ubonakala eyintanethi yenethiwekhi kwaye ufuna ukubhukuqa i-Instagram
Ngoku kuza uVero, inethiwekhi yentlalo eyilelwe ukuba ikunxibelelanise kuphela nabo banomdla ngokwenene.
Ukuthelekisa i-Samsung Galaxy S9 kunye ne-Sony Xperia XZ2
Thelekisa apho sinokubona ukuba zeziphi ezona mpawu ziphambili kwiitheminali eziphezulu zazo zombini i-Samsung kunye ne-Sony.
Uyithenga njani ngexabiso eliphantsi i-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 +
Ukuba ufuna ukuba ngomnye wabasebenzisi bokuqala ukonwabela i-Galaxy S9, kodwa ufuna nokugcina imali, into enzima nje ukuba ifike kwintengiso, ungasebenzisa isicwangciso sokuvuselela esinikezelwa yinkampani.
I-Ulefone isungula iimodeli ezimbini ezikwisikrini ukuze zithande intengiso
I-Ulefone T2 Pro kunye neqabane layo i-Ulefone X, iiterminal ezinesikrini esigcweleyo sikhatshwa yi "notch" eyaziwayo ye-iPhone X eneeprosesa zeMediaTek ukugcina kancinci.
Ukuthelekisa i-Samsung Galaxy S8 + kunye ne-Samsung Galaxy S9 +
Ukuba ufuna ukwazi ukuba kufanelekile utshintsho kwaye uhambe kwi-Galaxy S8 + uye kwi-Galaxy S9 +, apha ngezantsi sikubonisa itafile yokuthelekisa apho ungajonga khona ukuba utshintsho lufanelekile okanye hayi.
Ukuthelekisa i-Samsung Galaxy S8 kunye ne-Samsung Galaxy S9
Ukuba awukaqiniseki ukuba ngaba i-Samsung Galaxy S9 entsha, kweli nqaku sikubonisa uthelekiso phakathi kweflegi entsha yeSamsung kunye neGPS S8
Ikhaya leMovistar kunye neVodafone V-Ikhaya, sithelekisa iinkonzo ezintsha ezixhunyiwe ekhaya
Ezi nkampani zimbini zomeleleyo kwimarike yesizwe zigqibe kwelokuba zibheje kulwakhiwo lwasekhaya lokutsala abathengi abaninzi, iMovistar Home kunye neVodafone V-Home.
Iithagethi ze-ZTE 18: 9 nge-ZTE Blade V9
I-ZTE Blade V9, imodeli entsha enezinto zepremiyamu kunye nokuqwalaselwa kobuso kwiflegi.
INokia isungule ii-smartphones ezintlanu ezintsha, kubandakanya ukuphinda kuphindwe kwakhona kwifowuni yeMatrix
Inkampani yaseFinland iNokia inikezele ngesakhelo se-MWC ezintlanu zeetheminali eziya kuthi zifike kwintengiso unyaka wonke we-2018.
Uyilandela njani i- # Unpacked ye-Samsung Galaxy S9 yanamhlanje kunye ne-S9 Plus
Nje ukuba i-MWC yangaphambili iqale, sele sizibonile iindaba ezivela eHuawei ngale mvakwemini kwaye ngoku lithuba likaSamsung ...
Ivenkile yesithathu yeXiaomi eSpain ivule eBarcelona
UXiaomi uvule ivenkile yakhe yokuqala kwiSixeko namhlanje evula ngezinto ezimangazayo ezinje ngeethelevishini ezintsha eziza kuthi kungekudala zifike kwintengiso yethu ngokusemthethweni.
IAmazon ivula iivenkile ezintandathu ezingaphantsi kweeATM
Ngenxa yempumelelo yokuqala yevenkile yokuqala yeAmazon engenazimpahla, iAmazon GO, inkampani iyakhuthazwa kwaye izovula iivenkile ezintandathu ezintsha eMelika.
Yile ndlela ukhawulezisa ngayo ilori yeTesla, kwaye iya kukushiya uchukumisekile
Sithethile ngelori yeTesla iinyanga, kwaye ikhamera iyibambe kwizitrato zaseMelika ngesantya esipheleleyo.
Ukucoca kunye neenkcukacha zokwenyani zeGalaxy S9, ezi ziimpawu zayo
Sinazo zonke, ezi ziimpawu ezichazayo, iinkcukacha kunye neefoto zokwenyani zeGPS S9 esizibonileyo ngokuvuza okutsha.
Kuza kwenzeka ntoni kwimoto ethunyelwe nguTesla emajukujukwini? Ke unokulandela imeko yabo yendawo yokuhlala
Ukuphehlelelwa kweFalcon Heavy, iRocketX rocket eyayiphethe iTesla Roadster ngaphakathi, yasishiya sididekile ...
Ungasithulisa njani iphepha lewebhu kwiChannel
Iividiyo ezizidlayo ziyakukhathaza kwisikhangeli sakho? NgeGoogle Chrome ungazithulisa iiwebhusayithi kwaye sikubonise indlela yokwenza
USony ulungiselela "eyona midlalo yasimahla ikhe yafumaneka" ngo-Matshi kwi-PlayStation Plus
I-PlayStation ilungiselela ukumiliselwa kweyona midlalo yasimahla kwiimbali kule nyanga kaMatshi ngePS Plus.
Le yindlela i-Galaxy S9 ejongeka ngayo ivuzekile ngenxa yenyani eqinisekisiweyo
Inyaniso engathandabuzekiyo kukubheja okukhulu kwenkampani yeCupertino, iApple. Nangona kunjalo, i-Samsung ibonakala ifuna ukuhamba ...
Isamsung yazisa nge-SSD yayo entsha ye-30'72 TB
Isamsung isandula ukwazisa eluntwini into eyaziwa njengeyona ndawo inamandla kwidiski ye-SSD, iyunithi eyenzelwe ngokukodwa ukusetyenziswa kweshishini evelele i-30 TB yayo.
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neNintendo's Mario iyafumaneka kule encyclopedia
Ukuba sithetha ngoMario, nokuba uneminyaka engama-40 okanye emi-5 ubudala, ngokuqinisekileyo uyazi ukuba sithetha ngabani. UMario uphethe ...
Ialgorithm entsha kaGoogle iya kuxela kwangaphambili umngcipheko wentliziyo ngokujonga emehlweni
Ialgorithm entsha kaGoogle iya kuxela kwangaphambili umngcipheko wentliziyo ngokujonga emehlweni. Fumana ngakumbi malunga nale nkampani algorithm eya kuthi isetyenziswe kwishishini lokhathalelo lwempilo kwixa elizayo.
Ukucoca zonke iinkcukacha, amaxabiso kunye neefoto zeGalaxy S9 entsha
Kwaye yinto edla ngokwenzeka rhoqo kwiintsuku ngaphambi kokubonakaliswa kwesixhobo ...
UWaymo ufumana imvume yokubonelela ngohambo kwiimoto zakhe ezizimeleyo
UWaymo ufumana imvume yokunikela ngokukhwela kwiimoto zakhe ezizimeleyo. Fumana ngakumbi malunga nemvume efunyenwe yinkampani evumela ukuba ikhuphisane ne-Uber eArizona.
I-Dyson: Inkampani ye-vacuum yokumilisela iimoto zombane zepremiyamu ezintathu
I-vacuum cleaner inkampani iDyson iza kuphehlelela iimoto zombane zepremiyamu ezintathu. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani zokuzisa ezi moto kwintengiso.
I-Intel ijongene namatyala angama-32 ngaphezulu kweSpecter kunye neMeltdown
I-Intel ijongene namatyala angama-32 ngaphezulu kweSpecter kunye neMeltdown. Fumana ngakumbi malunga neengxaki inkampani ejongene nazo ngenxa yolawulo lwayo olubi kule meko.
Eyona ngozi iphambili kwi-HTC ngumongameli wayo, u-Chialin Chang
La ngawona maxesha mahle enkampani yaseTaiwan ebonakala ngathi yntywiliselwe emhadini ongenasiphelo. Ukusukela kwiminyaka ethile…
Umdlalo weGoogle dinosaur umdlalo uye waba yinto elungileyo kakhulu kula maxesha afileyo esinayo okanye xa singenaxhulumaniso kwi-intanethi, kokubini kwiselfowuni nakwikhompyuter yethu.
Umvukuzi we-idijithali yemali uphazamisa ukukhangela ubomi bangaphandle
Ukunyuka okungenakuthintelwa kukuba ii-cryptocurrensets zinayo kwihlabathi liphela, kwaye oko kubangele ukonyuka okungalinganiyo kwixabiso lazo, kuthintela i-SETI ekuqhubekeni nokufuna umbono okrelekrele wangaphandle.
UGoogle ususa "jonga umfanekiso" kwiMifanekiso kaGoogle
UGoogle ufikelele kwisivumelwano kunye ne-arhente yemifanekiso kaGetty: izakususa omnye wemisebenzi yemifanekiso kaGoogle kwaye yenze umyalezo wamalungelo obunini mkhulu
Sonos One, sihlalutya olona tshaba ngqo lwePod yasekhaya
Sinezandla zethu kwi-Sonos One, ezona zincinci zixhobo zobuhlakani kunye nelizwi lomncedisi uSonos anoluhlu lwayo.
I-Sonos Play: 1 sihlalutya esi sithethi silungele kuphela eyona inzima
Sinezandla zethu kwi-Sonos Play: 1, enye yezona zinto zindala kwaye zisenomtsalane kwi-Sonos ukuze uqalise kwesi sandi somgangatho.
I-18% yabantu abancinci baseSpain bangamakhoboka e-Intanethi
I-18% yabantu abancinci baseSpain bangamakhoboka e-Intanethi. Fumana ngakumbi malunga nedatha evela kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezempilo malunga nokusetyenziswa gwenxa kwe-Intanethi.
Le yiPod yasekhaya ngaphakathi, ayinakulungiseka ngokupheleleyo
I-ApplePod yasekhaya ye-Apple iye yaqhawulwa yi-iFixit kwaye ubunzima bokuyilwa kwayo kwenza amanqaku okulungiswa kube mancinci.
IVLC 3.0 ngoku iyafumaneka ngenkxaso yeChromecast, 8k, HDR kunye nokunye okuninzi
Uhlaziyo lwamva lwe-VLC lufikelela kuhlobo lwe-3.0 ngenani elikhulu lezinto ezintsha kuzo zonke izixhobo apho usetyenziso luhambelana khona, oko kukuthi, zonke.
I-BQ Aquaris X Pro, uhlalutyo lwale-middle-range ye-smartphone ekufutshane nesiphelo esiphakamileyo
I-BQ Aquaris X Pro yi-smartphone enamandla evela kwinkampani yaseSpain ene-4GB ye-RAM kunye nokukwazi ukurekhoda iividiyo ze-4K. Sikuxelela zonke iimfihlo zayo kuhlalutyo lwethu
Eyona Amazon ibalaseleyo yanamhlanje (12-02-2018)
Apha ngezantsi sikubonisa ezona zinto zinomdla esinokuzifumana namhlanje kwiAmazon, sinikezela apho sinokufumana khona ii-smartphones, izithethi, imemori khadi, izinti ze-USB ...
I-YouTube ibhengeza amanyathelo amatsha ngokuchasene nabasebenzisi bakho abanjengoLogan Paul
I-YouTube ithatha inyathelo ngokuchasene nabantu abanjengoLogan Paul. Iwebhu iyondliwa ngabantu abafana ne-youtuber eyaziwayo, ke bathabatha amanyathelo amatsha.
I-Pornhub iyayiphelisa yonke into enzulu yabadlali abadumileyo abenziwe ngobukrelekrele bokwenza izinto
Iqonga levidiyo ye-Pornhub sele iqalile ukucoca zonke iividiyo ezinzulu, iividiyo ezisebenzisa ubukrelekrele bokufakelwa ukubuyisela ubuso babalinganiswa abaphambili nabantu abadumileyo.
I-Russia ibambe iinjineli ezininzi ngokusebenzisa i-supercomputer kwimigodi ye-bitcoin
Iinjineli zaseRussia zibanjiwe zisebenzisa ikhompyuter enkulu kwimigodi yeBitcoin. Fumana ngakumbi malunga nezi ndaba zifuna ukwazi ezivela eRussia.
I-Facebook ivavanya iqhosha elithi "Andithandi" kwabanye abasebenzisi
I-Facebook inokulungiselela ukhetho olufunwa ngabasebenzisi beqhosha endingalithandiyo. Nangona kunjalo, le ayizukuba njengoko ucinga
Amapolisa amaTshayina asebenzisa iiglasi zokuqaphela ubuso ukukhangela abarhanelwa
Amapolisa amaTshayina, ekuzimiseleni kwawo ukugcina abemi belawulwa ngawo onke amaxesha, aqalisile ukusebenzisa inkqubo yokwazisa ubuso kwiiglasi zamapolisa
Khuphela isicelo seGadget News se-Android kwaye uhlale unolwazi [SWEEPSTAKES]
Senza esi sithethi simangalisayo se-SPC Bang phakathi kwabasebenzisi abangamawaka bokuqala abakhuphela usetyenziso lwethu.
Zonke ezi zii-Motorola eziya kuhlaziywa kwi-Android Oreo
Apha sikubonisa zonke iiterminal ze-Motorola eziya kuhlaziywa kuhlobo lwamva nje lwe-Android Oreo 8.0 kwiiveki ezizayo.
IFransi ibhengeza imfazwe kubaphathi beemoto ze-smartphone
Ngokweengxelo zamva nje, amaGaul alungiselela umthetho omtsha oya kuvala abanini beefowuni eziphathwayo kwideshibhodi.
Sihlalutya iRowenta Air Force 360, imveliso eguquguqukayo ngexesha lokucoca irobhothi
I-Rowenta isiboleke ngobubele iyunithi yesixhobo sayo seRowenta Air Force 360, isicoci-somtshayelo esingenazingcingo esipheleleyo esifuna ukucacisa ukuba asikho kwixesha leerobhothi zomtshayelo.
IHuawei ilungiselela ukuboniswa kwethebhulethi yayo yeMediaPad 5 ye-MWC
Iindaba ezinxulumene nomsitho weBarcelona ziyaqhubeka nokufikelela kwigumbi lethu leendaba kwaye kule meko sineendaba ...
I-Xiaomi Mi A1, ilungile, intle kwaye inexabiso eliphantsi? Siyihlalutya ngokweenkcukacha
Masiye apho ke ngohlalutyo oluneenkcukacha lweXiaomi Mi A1, ifowuni ehlala ibinzana: ilungile, intle kwaye inexabiso eliphantsi, ngaba kufanelekile?
Ezi zezona ntengiso zibalaseleyo ezivela kwi-Super Bowl ka-2018
Iintengiso zeSuper Bowl bezisoloko yenye yezona zinto zinomdla kulo msitho. Kule nqaku sikubonisa ezona zilungileyo.
U-Elon Musk uya kutshintsha igama lomlilo ngenxa yeengxaki ezinokubakho kumasiko
U-Elon Musk utshintsha igama lomlilo ngamasiko. Fumanisa ngakumbi malunga neengxaki adibene nazo namasiko.
I-PS4 Pro iya esikalini ngokuthatha isampulu kwinguqulelo 5.50
I-Sony isungula i-firmware 5.50 ye-PlayStation 4 Pro eyona nto inomdla kakhulu kukuba isisombululo esisibonisayo sithatyathwa sisampulu.
I-Apple izakulungisa i-iPhone 7 yasimahla ebonisa umyalezo "akukho nkonzo" xa kukho uthungelwano
I-Apple izakulungisa i-iPhone 7 ngomyalezo "akukho nkonzo". Fumanisa ngakumbi malunga nengxaki echaphazela iifowuni zeApple kwaye inkampani iya kulungisa.
I-PlayStation 4 imalunga nokuthengisa ngaphandle kwePS3
Ukuthengiswa kwePlayStation 4 kungekudala kuza kudlula kwePS3. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso yekhonsoli yeSony esele igqithile kwisizukulwana sayo sangaphambili.
I-Ebay iyayeka ukusebenzisa i-PayPal njengeyona ndlela yokuhlawula iphambili
I-Ebay ayizukusebenzisa i-PayPal njengeyona ndlela iphambili yokuhlawula. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo senkampani sokuyeka ukusebenzisa iqonga lokuhlawula.
Ingozi kwinkulumbuso kunye nokunikezelwa kwemoto ezimeleyo iPhomom AI [Ividiyo]
Kwaye kukuba kuvavanyo oluqhutywa zizithuthi ezimeleyo iingozi zinokwenzeka kwaye kule meko ...